Ny gara Storo Onyx an'i Roborock dia Manamora kokoa [famerenana] | Vaovao Gadget
Ny Station Onyx Dump an'i Roborock dia manamora kokoa [Famerenana]
Miguel Hernandez | | Automatique ao an-trano, Gadgets, an-trano, hevitra
Vao haingana izahay no nandinika eto Roborock S7, robot vacuum cleaner izay manosotra ihany koa ary manome valiny tena mahavariana. Hatramin'izao, ny sanda tsara indrindra ho an'ny volan'ny robot dia nandinika ny fantsona. Na izany aza, ny sisin-tany amin'ny fahalavorariana ho an'ny antsipiriany kely, ny toeram-pialan-tsasatra dia ilaina hatrany.
Roborock dia nanolotra ny toby fanarian-tena vaovao ary efa nohamarininay lalina mba hijerenanao ity fanampim-panazavana Roborock S7 ity. Jereo miaraka aminay ny fomba fikojakojana farafahakeliny ny fikojakojana ny mpanadio robot anao ary afaka manararaotra ny fotoana tsy laninao amin'ny fako ilay fitaovana.
Io no lehibe Achilles ombelahin-tongony amin'ireo karazana fitaovana ity, rehefa manafoana azy ireo. Ny tahiry dia manome amin'izay omeny, ary rehefa manana biby fiompy ianao (toy ny tranga misy ahy) dia manome tsara ho an'ny fanadiovana roa indrindra. Noho izany, isaky ny te-hamerina hanamboatra ny Roborock S7 aho dia tsy maintsy tadidiko na nafoiko ny tanky na tsia. Ho lasa olana tsy dia fahita firy izao noho ny fitaovana fitsapana ataonay, ity tobim-pahefana mandoto tena izay Roborock ity dia nifanaraka tamin'ny mpanadio vavony mandroso indrindra ary lasa iray amin'ireo mpiara-dia aminy akaiky indrindra izy avy hatrany.
1 Fitaovana sy endrika: Roborock style
2 Rafitra fanangonana fako sy vovoka
3 Miaraka amin'ny fifandraisana hendry
4 Ny traikefan'ny mpampiasa
Fitaovana sy endrika: Roborock style
Ny toby fanarian-tena Roborock S7, ahoana no tsy izy, tonga amin'ny loko roa, mainty sy fotsy, mifanentana amin'ny lokon'ny fanadiovan'ny robot anao. Izy io dia manana fototra mahazatra sy somary nakarina, amin'ny fomba mitovy amin'ny manana rafitra varingarina roa sosona izay misy ny tanky sy ny motera suction. Ho an'ny ambiny, ity dock ity dia manao asa mitovy tanteraka amin'ny tobin'ny fiantsenana, izany hoe, afaka mampifandray ny robot-nao amin'ny herinaratra izy mba hirosoana amin'ny famoahana ny fitaovana.
lanja: 5,5 Kilogramatra
Dimensions: 31.4 x 45.7 x 38.3 cm
Loko azo: Mainty sy fotsy
Misy mpitazona tariby any aoriana, mba hahafahanao mametraka azy tsy mazava amin'ny toerana rehetra, zavatra tena ankasitrahana. Eo amin'ny farany ambany dia misy fahasarotana kely izay manampy ny fitaovana hiakatra amin'ny làlana kely, amin'ny fomba fanararaotany ny fanadiovana ireo paingotra manafatra amin'ny karazana borosy napetraka stratejika amin'izany. Tsy misy isalasalana, hampifandraisinay mora foana amin'ny marika izy noho ny refy sy ny endriny, ka mifanaraka tanteraka amin'izay antenainao amin'ny namana Roborock S7.
Rafitra fanangonana fako sy vovoka
Ity fizarana voalohany ity dia tena zava-dehibe, raha ny tena izy dia toa zava-dehibe indrindra amiko ary izany no antony tokony hiresahana lava momba izany. Fantatrao sahady fa ny ankamaroan'ireny tobim-pamoahana fiara tsy mandeha amin'ny fiara ireny dia mitaky andiana "kitapo" izay mazàna manana endrika manokana, ary raha tsy misy azy ireo dia tsy misy ilana azy. Na izany aza, ity tobim-pahalotoan'ny Roborock S7 ity dia mamela anao rafitra roa hanala sy hitahiry loto:
Ao amin'ny tanky hermetika amin'ny alàlan'ny rafitra suction cyclonic
Ao anaty kitapo «mpihaza vovoka»
amim-pahombiazana, Safidy na hampiasa ilay kitapo tanky Roborock S7 na tsia. Na dia marina aza fa ity kitapo ity dia natao manokana ho an'ny vovoka ary ahafahantsika manafoana ny gara tsy manala ny tanky, dia tsy singa tena ilaina izy io.
Ny kitapo vovoka dia manana haben'ny 1,8 litatra ary manisy tombo-kase mandeha ho azy. Apetrakay eo amin'ny toerana ambony izy io amin'ny alàlan'ny torolàlana momba ny baoritra ary esorinay amin'ny alalany ambany rehefa famehezana. Ity kitapo ity dia manana fitsaboana bakteria mba hiantohana ny tontolo madio hatrany.
Ankoatra izany, afaka mandeha mivantana amin'ny famolavolana cyclone maro ianao (miaraka amin'ny isa 15) miaraka amin'ny hafainganam-pandeha isan-karazany izay ahafahanao manafoana ny tank Roborock S7 mora foana. Manana hery efatra izahay miankina amin'ny tabataba sy ny fanjifana angovo heverinay fa:
Manoro hevitra ny ambony indrindra aho, na dia mety hitombo mihoatra ny mahazatra aza ny tabataba, eto ny zava-dehibe dia ny manafoana tsara ny robot, ary izany no ataony. Ity tank ity dia manana sivana mahazatra sy sivana roa hafa izay miantoka ny tombo-kase feno mba tsy ho afa-mandositra ny vovoka. Tsy lazaina intsony fa azo esorina ireo sivana rehetra ireo ary afaka diovina mora foana ao ambanin'ny paompy, na dia tsy naharitra loatra aza ny fitsapana anay. Raha toa ka misafidy ny hivoahana amin'ny alàlan'ny rafitra fisotroana varingarina marobe isika dia hanana tanky 1,5 litatra, somary ambany kokoa noho ilay kitapo fandrika vovoka.
Manodidina ny efatra herinandro ny fahaizan'ny tanky
Ny fampifangaroana ireo haitao rehetra ireo dia mahatonga azy io ho fitaovana tokana, satria tsy misy intsony ny rafi-pivoahan'ny robot manadio automatique izay mamela ny kitapo sy ny tanky manara-penitra ampiasaina hifanakalo. Noho izany, ary rehefa jerena ireo voalaza etsy ambony ireo dia nahazo fanamarinana isan-karazany tao amin'ny TÜV Rheinland momba ny fanatsarana ny fari-piainan'ireo marary allergy.
Miaraka amin'ny fifandraisana hendry
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny tobin'ny Roborock S7 izay manafoana tena dia mifandray amin'ny fampiharana Roborock amin'ny teny mitovy amin'ilay mpanadio banga robot. Raha teôria dia manararaotra algorithm iray noforonin'ny marika izy mba hampifanaraka ny famafana ny fepetra takian'ny fahazaran-dranon'ireo mpampiasa, saingy tsy hitako loatra ny fahasamihafana. Azontsika atao ny mifehy ny fizotrany sy ny herin'ny famaohana mora foana miaraka amin'ny fampiharana miombona tsara, marina fa tsy diso anjara asa bebe kokoa koa isika.
Ny traikefan'ny mpampiasa
Toy ny nitranga tamin'ny Roborock S7, ny traikefa nomen'ny tobim-panafoanana fiara vaovao ho ahy dia tena tsara tokoa. Izaho manokana dia aleoko ny rafitra fandosiranana siklisika ao anaty tanky mba hialana amin'ny famoronana loto bebe kokoa amin'ny kitapo sy hampihenana ny fikojakojana, kanefa, manamora kokoa ny fanesorana ny loto amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo kitaponao izay voaisy tombo-kase tsara.
Ny robot dia natomboka tamin'ny vidiny izay manodidina ny 299 euro, azo vidiana manomboka izao amin'ny Geekbuying, na dia antenaina hahatratra ny teboka mahazatra aza ny varotra tsy ho ela. Na mendrika na tsia ny fampiasam-bola hialana amin'ny fahabangana tsy tapaka, avelako eo am-pelatananao izany.
Roborock S7 manafoana tena
Multifunction miaraka amin'ny kitapo na tanky
Easy fametrahana tsara famolavolana
Fifandraisana sy fikirakirana
Mety ho be loatra ny tabataba
Ny habe dia be
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Ny Station Onyx Dump an'i Roborock dia manamora kokoa [Famerenana]
Kamera fanaraha-maso horonan-tsary miaraka amin'ny fiarovana 360
Famakafakana ny smartwatch AUKEY LS02 sy ny lozisialy Aircore 15W